Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd estabilished ngo-2009 kwaye ibekwe Liling, kwiPhondo Hunan, China. Thina inkampani eyodwa yodongwe yobuchule kunye nelungelo neentengo kwamanye amazwe. Siya ezizodwa kwizitya mlilo kulingwa, alumina iiseramikhi, iimveliso elinjubaqa yodongwe, njl, sinako ngokusesikweni iimveliso ezikhethekileyo ezimilise ngokweemfuno zabathengi.
Njengomvelisi enamandla ngobuchule kulingwa komlilo ngokuyinyibilikisa, kufuneka isakhiwo 7000 square metres ezintsha mveliso kunye umgca wemveliso oluzenzekelayo. Iimveliso asetyenziswa uhlalutyo elinqabileyo metal, uvavanyo laboratory kwemigodi, izimbiwa, akukulinga kunye akukulinga negolide. Umlilo kulingwa crucibles eziphathekayo nto fireclay axutywe nezinye izinto elinjubaqa, bakwazi ukumelana ubushushu ukuya ku 1300 ℃. Bona enokumelana elihle ekuhlaselweni wampompoza, ukhukhuliseko, ngokuhlaziya kunye nokothuka thermal.
Ukubambelela kumgaqo kwishishini neenzuzo macala, siye wayesaziwa ethembekileyo phakathi kubathengi bethu ngenxa ngeenkonzo zobungcali, iimveliso zethu ezisemgangathweni kunye namaxabiso aphantsi. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi ukusuka apha ekhaya nakumazwe angaphesheya ukuze basebenzisane kunye nathi ngempumelelo eqhelekileyo. Ukutyhubela iminyaka, iimveliso zethu wathengisa kakuhle kulo lonke eli lizwe, kwaye zithunyelwa eJamani, United States, Brazil, Russia, Mexico ... kumazwe angaphezu kwama-20, umgangatho imveliso kunye nenkonzo banconywa kakhulu ngabathengi.
Injongo yethu kukuba: high quality, ixabiso eliphantsi, ukholo elungileyo. Sicela sikhangele phambili kwinginginya ezibanzi intsebenziswano basekhaya kunye nabathengi bangaphandle, uphuhliso eqhelekileyo.
Yintoni uhlobo isiqinisekiso onayo?
Thina ISO9001, ISO14001, PED, SGS
Ngaba ukwamkela ishishini OEM?
Ewe, sinikezela OEM kunye nenkonzo ODM. Nje uthumele ukuba umzobo wakho ukuba unayo. Ukuba awunalo umzobo, xelela nje ukuba ingcamango yakho, siza kusebenza le kumzobo kuwe.
Yintoni na umgangatho package?
Ukuba iimveliso ezithile ingxaki umgangatho, ubuya kwenza njani na?
Siya uxanduva zonke iingxaki esemgangathweni.
Ndingalufumana iisampuli ukusuka efektri yakho?
Ewe, isampuli ikhululekile, kodwa intlawulo okucacileyo ngowakho.